Ngwa 7 kachasị mma na egwuregwu maka ụmụaka maka Android | Gam akporosis
Taa, otu n’ime ihe ndọpụ uche na usoro mmụta kachasị dị irè maka ụmụaka na-agụnye ekwentị gam akporo. Ma ọ bụ na, site na ndị a na ngwa niile na egwuregwu dị, nke ọdụdụ nke ụlọ nwere ike iji oge ha n'efu. Kpamkpam n'ihi nke a anyị na-ewetara gị ọhụrụ a chịkọtara post, otu nke ị ga-ahụ ihe kacha mma 7, ngwa ọrụ na egwuregwu maka ụmụaka.
Anyị na-edepụta egwuregwu na ngwa ndị na-atọ ụtọ ndị dị ugbu a na Playlọ Ahịa Google Play maka ụmụaka. Ha niile nwere onwe ha ma, n'ezie, ndị kacha mma n'ụdị ha. Na mgbakwunye, ha nwere ọkwa dị mma na nkọwa ndị na-akwado ya.
N'okpuru ebe anyị agbakwunyere usoro nke ngwa kacha mma maka ụmụaka na gam akporo igwe. Okwesiri ighota, dika anyi na eme, na ndị niile ị ga-ahụ na mkpokọta akwụkwọ a bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ụdị ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile. Agbanyeghị, otu ma ọ bụ karịa nwere ike ịnwe sistemụ nkwụnye ego dị n’ime, nke ga-enye ohere ịnweta nnabata ọdịnaya n’ime ha, yana atụmatụ adịchaghị mma na nke dị elu. N'otu aka ahụ, ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ ọ bụla, ọ bara uru ịmeghachi. Ugbu a ee, ka anyị gakwuru ya.
1 Ibe agba agba ụmụaka! Egwuregwu ụmụaka!
2 Akwụkwọ ozi dị na igbe! Mkpụrụedemede mmụta egwuregwu!
3 ABC agụmakwụkwọ egwuregwu maka ụmụaka! Mụta ịgụ ihe!
4 WAmụaka EWA: Bekee maka Childrenmụaka
5 Asọmpi nke isi obodo
6 Bekee maka ụmụaka: mụta ma kpọọ
7 Esslọ akwụkwọ ọta akara Montessori
Ibe agba agba ụmụaka! Egwuregwu ụmụaka!
Otu n'ime ihe ụmụaka hụrụ n'anya nke ukwuu, na-enweghị obi abụọ, bụ agba. Ọ bụ ya mere egwuregwu nke ụdị a enweghị ike ịla n'iyi na mkpokọta mkpokọta a, ebe ọ bụ na nke a bụ otu n'ime ọrụ ndị na-atọ ha ụtọ nke ukwuu, ma n'otu oge ahụ, ọ bara uru maka imepụta ihe, echiche na ọgụgụ isi.
O nweghi ihe o mere nwata n’obere obere. Ngwa a dị mma maka ndị dị afọ 3 na okenye. Naanị kụziere ya na usoro ahụ ma nwa ahụ ga-eji ya n'onwe ya. Will ga-ahụ na, n'ihe gbasara nkeji ole na ole ma ọ bụ karịa, ọ ga-ejide ya wee malite agba agba na-enweghị nkwụsị.
Ezubere ya iji gbaa uto maka nka Ọ na-abịa na mkpụrụedemede 100 mara mma ma na-adọrọ adọrọ ka agba ya, yana ọtụtụ eserese na ntinye ahịrị na eserese aka. O nwekwara ọtụtụ egwuregwu mmụta, ihe karịrị 300 ihe nkiri na-atọ ụtọ na ụda, akwụkwọ agba na eserese eserese maka ụmụaka, egwuregwu maka ụmụaka dị afọ 3 wee ruo iji zụlite ezigbo ikike moto, egwuregwu n'efu maka ụmụ agbọghọ ịzụlite nka tupu ede, ịse egwuregwu n'ihi na ụmụ anụmanụ na a nne na nna akara atụmatụ na free sere egwuregwu.
Bini Malen Kinderspiele ab 3!
Akwụkwọ ozi dị na igbe! Mkpụrụedemede mmụta egwuregwu!
Akwụkwọ ozi dị na igbe! bụ ngwa nwere ọtụtụ ụzọ na egwuregwu maka ịmụ akwụkwọ ozi maka ụmụaka. Ọ bụ ngwa ọrụ, nkuzi na ọagoụ maka nwata nke ụlọ, ma nwee nzube nke inye aka na mmepe ha na uto nke uche ha, site n'igosi usoro mmụta ọgụgụ dị iche iche maka ụmụaka site na 2 ruo 5. O nwekwara ike ịdị irè na ụmụaka toro eto, mana ọ na-elekwasị anya na ọdụ.
Ngwa a nwere egwuregwu nke ụmụaka ga-achụ nta ma jide akwụkwọ ozi iji mepụta ma wuo okwu dị mfe. Akwụkwọ ozi ndị ahụ dị mma ma mara mma nke ukwuu, ya mere, ha na-adọta uche ụmụaka iji mee ka mmụta uche ha megharịa ha anya.
Mụaka nwekwara ike ịmụ mkpụrụ okwu na Akwụkwọ Ozi dị na igbe!, Ebe ọ bụ na ọ na-eji ndị niile dị adị, yabụ ha nwere ike ịmụta iji ha niile. Site na ngwa ngwa nke ngwa a, ụmụaka na-amatakarị ụda nke okwu, yana ihe ha pụtara na otu esi eji ha.
Ihe mgbagwoju anya niile o na-eweta iji wulite okwu bu maka izi ihe; mgbe ị na-edozi ha, a na-ewepụta onyonyo nke na-enye nkọwa doro anya nke okwu ndị ahụ. E nwere ihe karịrị 100 okwu na ụmụ nwere ike ịmụta ekele na-atọ ụtọ Ọnọdụ gosipụtara site animated leta nke egwuregwu na ngwa a.
Ị na-enye ABC na igbe! Alphabet
ABC agụmakwụkwọ egwuregwu maka ụmụaka! Mụta ịgụ ihe!
ABC agụmakwụkwọ egwuregwu maka ụmụaka! bụ ihe ọzọ dị ukwuu ngwa maka ụmụaka na-amalite n’afọ 4 ruo 5. Ọ dịkwa oke nkenke maka ụmụaka nwere nsogbu mmụta na ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị, nyere ọdịnaya niile ọ na-eweta n'ụzọ ọ andụ ma na-atọ ụtọ site na egwuregwu na eserese na nkuzi banyere mkpụrụedemede, okwu, okwu na mkpụrụedemede.
Usingmụaka na-eji ABC Agụmakwụkwọ Egwuregwu maka Kidsmụaka! Ha ga-amuta otu esi aputa, guta, ma kpoputa okwu na nkeji okwu. Ọzọkwa iji chọpụta ma jiri mkpụrụ okwu. Ihe ọzọ bụ na Ha ga-amụta ide okwu dị mfe, wee ga n'ihu dee ederede ogologo na mgbagwoju anya. Ọ bụ ezigbo onye inyeaka mmụta, na-enweghị mgbagha, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na nwatakịrị nwere ụfọdụ nsogbu mmụta na ụkọ nlebara anya, ebe ọ bụ na ihe nkiri, agba na egwuregwu niile dị na ngwa a na-emikpu ma na-atọ ọchị.
N'otu oge ahụ, Ngwa a na-enyere ụmụaka aka ịghọta okwu, ọ bụghị naanị ide na ịkpọ okwu. Na-eme ka ụmụaka mụta ihe ọ pụtara n ’ụzọ dị irè.
Mmetụta nke ngwa a maka ụmụaka gosipụtara na ọkwa ya nke ihe karịrị 4.3 kpakpando, ihe karịrị nde 5 nbudata na ihe karịrị 25 puku ihe ngosi dị mma. Ọ bụghị maka ihe ọ bụla bụ otu n’ime ihe ndị kachasị eji na ibudata na ya.
Vorschule spiele & Lernspiele!
WAmụaka EWA: Bekee maka Childrenmụaka
Ikekwe ị nụla ngwa EWA maka ịmụ Bekee tupu oge a, nke a nwere ike ịbụ n'ihi nnukwu ewu ewu nke ngwa mbụ na applọ Ahịa Play, nke nwere ihe karịrị nde 10 na nbudata na akara ngosi 4.6. EWA :mụaka: Bekee maka Childrenmụaka bụ nsụgharị nke ezubere maka nwata, yana usoro nkuzi na usoro mmụta maka nwata.
Mụaka nwere ike iji ngwa a jiri ya naanị nkeji iri na ise kwa ụbọchị, nke na-ezukarị iji kpokọta ihe ọmụma. Agbanyeghị, maka nsonaazụ ngwa ngwa na ogologo oge, ọ ka mma karịa. O nwekwara eserese, nnọchite anya na, n’ezie, egwuregwu dị iche iche na-enyere aka na nkuzi nke bekee tomụaka. Ọ dị ezigbo mma ma na-enye ọtụtụ usoro na usoro maka mmịnye asụsụ ahụ na ụmụaka.
Ọ na-abịa ọtụtụ nkuzi, usoro ọmụmụ, na ntụgharị iji nyere usoro mmụta aka, yana obere egwuregwu na egwuregwu dị mfe. O nwekwara ọtụtụ narị akwụkwọ nwere ntụgharị na eserese na - enyere aka ijigide asụsụ bekee. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ọ na - anọchite ọtụtụ okwu site na igwe okwu ka nwatakịrị ahụ mata ka esi akpọpụta ya.
Ụmụaka EWA: Bekee maka ụlọ akwụkwọ ọta akara
Developer: Lithium ụlọ nyocha Pte Ltd
Asọmpi nke isi obodo
Asọmpi nke isi obodo bụ nnukwu ngwa na ngwa maka ụmụ ntakịrị mụta nke bụ obodo kachasị mkpa na isi obodo n'ụwa. Iji ngwa a, ụmụaka ga-amuta ihe gbasara ọdịdị ala na ọtụtụ mba.
Site na ajụjụ na ọtụtụ egwuregwu, ụmụaka ga-enwe ike ịchọpụta isi obodo ndị ziri ezi maka obodo ọ bụla. Nke a egwuregwu atụmatụ animations, cartoonish ndịna ezigbo maka obere ụmụaka, na ihe ụtọ soundtrack. N'otu oge ahụ, ọ na-akụzi banyere ihe ncheta nke mba, ego mba ofesi na nke ọ bụla, ọkọlọtọ, mpaghara, kọntinent na ọtụtụ ndị ọzọ. O nwekwara ụdị egwuregwu 10 n'efu na ọkwa 5 isi ike nke nwere ike ịgbanwe.
Ajụjụ ajụjụ Hauptstädte
Developer: super gonk
Bekee maka ụmụaka: mụta ma kpọọ
Dị ka anyị maara na ịmụ Bekee bụ otu n’ime ihe ndị kacha arụpụta ọrụ maka ụmụaka ụlọ, anyị wetaara gị ngwa ọzọ maka ya, nke a makwaara site na ịbụ otu n’ime ụdị ihe kachasị mma, nyere ya ọtụtụ ọrụ, egwuregwu na ntuziaka ntuziaka iji mụta okwu site na isiokwu dị iche iche dịka mkpụrụedemede, ọnụọgụ, agba, ọdịdị, ụbọchị nke izu, ọnwa nke afọ, mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, anụmanụ, nnụnụ, nri, akwa, kichin, ime ụlọ, ime ụlọ, ụlọ akwụkwọ na egwuregwu.
Ngwa a na-abịa na egwuregwu nke ịchọta na ịmepụta okwu bekee site na ederede. Ọ na-atụmatụ Egwuregwu mgbagwoju anya na usoro nkuzi nkuzi maka ụmụaka na-enyere ha aka na klaasị Bekee ha na, ọ bụrụ na ha anọghị n ’ọ bụla, ịnụ ụtọ asụsụ ndị ọzọ. Na nke a, ụmụaka ga-amụta asụsụ bekee nke ọma.
English maka Kinder
Esslọ akwụkwọ ọta akara Montessori
Iji mechaa nchịkọta mkpokọta nke ngwa kacha mma na egwuregwu maka ụmụaka ndị dị na Androidlọ Ahịa gam akporo gam akporo, anyị nwere Montessori Preschool, ngwa zuru oke nke nwere ọtụtụ ọrụ na mmemme ngosi maka ụmụaka na ụmụaka ndị nwere nghọta na mmụta Nsogbu ma na ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị ma n’ụlọ akwụkwọ.
Ngwa a metụtara isiokwu dị ka agba, ọdịdị, ịkpọ okwu, ịgụ okwu dị mfe ma sie ike, ọnụọgụ, mgbakwunye, mwepu, egwu na ọtụtụ ndị ọzọ. Ya mere, Ọ bụ otu n'ime ihe zuru oke maka nkuzi na mmụta. Ọ ọkachamara na ụmụaka sitere na 3 ruo 7 afọ, ma ọ nwekwara ike zuru oke maka ụmụaka ndị toro eto bụ ndị na-amụtabeghị ihe ndị bụ isi na nwata. Ọ na-arụ ọrụ dịka klaasị a na-ahụ anya na, iji nọrọ na mkpali, ọ na-enye usoro nkwụghachi ụgwọ nke ga-eme ka ụmụaka tụkwasịrị mmụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa 7 kachasị mma na egwuregwu maka ụmụaka maka gam akporo